UMasipala iSundays River Valley wamkela abafundi kunyaka omtsha wemfundo
UKUQALA konyaka nokuvulwa kwezikolo ngomhla we-11 kuJanuwari 2017, uMasipala waseKhaya iSundays River Valley uye ezikolweni ngenjongo zokwamkela abafundi nokubakhuthaza ukuba basebenze nzima kulo unyaka.
Usomlomo walo masipala uCeba Simphiwe Rune utyelele isikolo samabanga aphakamileyo iSamkelwe e-Addo njengenxalenye yeli phulo.
“Le nkqubo ibijoliswe ekukhuthazeni abafundi ukuba basebenze mzima kulo nyaka nokuqinisekisa ukuba urhulumente uyilungele imiceli-mngeni anokuthi ajamelane nayo,” kubeka uSodolophu weSundays River Valley uNombulelo Bixa.
UCeba Rune ucenge abafundi ukuba bayithakazelele ngokubaluleka kwayo imfundo. Ukwagxininisile kootitshala ukuba badlale indima yabo ekwakheni isizwe sangomso.
“Ukwacacise nendlela athi ngayo urhulumente, ngeSebe lezeMfundo, namanye amaziko abambisene nawo, baqinisekise inkxaso kwimfundo kule ndawo yabo,” kubeka okaBixa.
UMasipala waseKhaya eSundays River Valley ukwadombozile kubazali kwakunye nabo banoxanduva lokujonga abantwana ukuba baqinisekise ukuba abantwana bayaya esikolweni ngexesha ekulindeleke ukuba benze njalo.
“Sicela abahlali nabazali ukakhulu, ukuba baqinisekise ukuba abantwana banako ukufunda.
“Olu asilo xanduva olujongene nootitshala kuphela. Simelwe ukuba sibambisane ukudala imeko eyakuthi ilungele ukufunda ezikolweni naphakathi koluntu,” utshilo.
EDUCATION IS IMPORTANT… Speaker of the Sundays River Valley Local Municipality, Simphiwe Rune, spent time at Samkelwe Senior Secondary School, in Addo, as part of the municipality’s back to school programme.